I-CENTRIFUGAL Pump ayikwazi ukushaya imbangela yamanzi
Kunomoya endaweni yokungena nepompo (1) abanye abasebenzisi abangagcwalisi amanzi anele ngaphambi kokuqala kwepompo; kwesinye isikhathi amanzi abonakala sengathi achichima emgodini we-vent, kepha angawuphendulanga umgodi wepompo emoyeni usukhathele ngokuphelele, kushiya umoya omncane usepayipini lokungena noma upompe i (2) wi ...
UHLELO LOKWAKHIWA KWEZIMPAHLA ZESITOLO
Lunjani udaka olusebenzayo luphume enqwabeni enesithukuthezi? Le yinkinga enzima yokumba ukwakhiwa kwezinqwaba. Uhlelo lwendabuko lokubhola nokugaya inqwaba yensimbi yilawa: kusenqubo yokumba ukusetshenziswa kwe-sieve, udaka ku-gravel omncane, isihlabathi nezinye izinhlayiya eziqinile zokwehlukanisa, i-pil ...
IZIMBANGELA ZOKUHLAZIYWA KOKUVALWA KOKUVALWA KWEZIMPAHLA KWE-CEMRIFUGAL PUMP
Ukuvalwa kwepompo kweCentrifugal kubangelwa kakhulu ukwehluleka kophawu lwemishini. Ukwehluleka ukusebenza kokuvuza okuningi, izizathu zokuvuza okulandelayo: ① static and dynamic ring seal surface leakage, the main reasons are: the end plane flatness, roughness did not meet the req ...
Shijiazhuang Winclan Imishini Equipment Co., Ltd.